Ahụmahụ ihe karịrị afọ 22
Ụkpụrụ nduzi anyị
Ụkpụrụ, omume, na omume
Ndị mmadụ na-elekwasị anya
Top 6 mere ịhọrọ anyị
Ihe mkpuchi anwụ
Polyester Sunscreen ákwà
Fiberglass Sunscreen ákwà
Ihe mkpuchi zebra ákwà
Ọkara Blackout Sunetex
Ihe mkpuchi nke Verman
Akwa ákwà mkpuchi kwụ ọtọ
Ihe mkpuchi mmanụ aṅụ
Akwụkwọ ikike ịdị mma nke afọ 10
20 Years Reliable Brand
86 Tọrọ igwe eji akpa akwa Dornier
Ihe karịrị 1200 Ụdị & Agba
Ụlọ ọrụ anyị dị na Chengdu, ebe etiti na China!
Nlebanya dị mma
Ngwa kemịkalụ na njirimara anụ ahụ nnwale na nyocha akụrụngwa na ndị injinia.
Ngwá ọrụ dị elu sitere na Germany na ndị otu teknụzụ goro France.
Ụlọ nkwakọba ihe nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ọma, hụ na ngwongwo gị dị n'ọnọdụ zuru oke tupu mbupu.
Ebe enwere Sunshine, enwere Groupeve.
Fiberglass Sunscreen Fabric kacha ewu ewu 5% ...
Nhọrọ dị iche iche Roller Blinds Fabric Semi Blackout
Ngwakọta Fiberglass Antibacterial Blackout na Eco-Friendly ...
Ụdị Egwurugwu Egwurugwu na-ekpuchi ákwà polyester
Akwa oyi akwa okpukpu abụọ nwere agba 100% ...
Ejiji ahaziri iche Shangri-La kpuru akwa ...
Ọnụ ahịa ndo zebra dị elu 100% ...
Atụmatụ efu efu karịa usoro 650
Iji gboo mkpa nke ahịa mpaghara
atụmatụ nkesa ákwà
Polyester Blackout ákwà
Nye iwu ugbu a
Ụlọ ọrụ Groupeve CO., LTD
Groupeve bụ ụlọ ọrụ na-emepụta ihe nke anwụ na-emepụta ihe na-ejikọta imewe, R&D na ire ahịa.Ọ na-abịa na sistemụ adịchaghị, ụlọ ọrụ ama ama mgbe ọ bụla.
Ihuenyo windo & ụzọ
Ndị mmadụ nọ n'ọfịs na-ahọrọ ka anwụ na-acha n'agbanyeghị na site na windo na-ele anya kacha mma, ikuku ikuku, nchebe UV, chọta windo zuru oke na ọnụ ụzọ anyanwụ iji gboo mkpa gị, akwa Sunetex sunscreen nke ejiri fiberglass kpuchie vinyl ma ọ bụ yarn polyester, nke. bụ nhọrọ kasị mma maka gị ahịa na factory kpọmkwem ahịa.
Igwe na-achịkwa anyanwụ nke ime Sunetex
Groupeve na-enye ezigbo mma Sunscreen Fabric maka windo, ọnụ ụzọ, na mkpuchi mkpuchi n'èzí, nke na-enye nguzozi zuru oke nke ọkụ, ikuku, nkasi obi na ịma mma, na-eme ka ha bụrụ ihe ngwọta dị mma nke na-ekpuchi windo maka ebe obibi na nke azụmahịa, na-eji ihe mkpuchi moto. , ị ga-eche na ị nwere ike ịchịkwa ụwa.
Mee ka nzuzo gị kwa ụbọchị
Ngwọta mpio nzuzo bụ ihe ngwọta zuru oke iji tinye nnukwu nzuzo ụbọchị n'ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ.Chọta akwa dị elu nke nwere ihe ọhụrụ, anyị na-enye ihe karịrị 950 ụkpụrụ maka nchịkọta.Webawanye azụmahịa maka ire ngwa ime na mputa gị.
Mee ka ụlọ gị dịkwuo mma
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịchọ afọ 10 àgwà akwụkwọ ikike roller blinds akwa ihe si China factory, gbasaa gị ụlọ window ọgwụgwọ ahịa ahịa.Akwa akara anwụ nke Sunetex dị mma maka ụlọ ndị ahịa gị niile na ngwa obibi nwere ọnụ ahịa asọmpi.
Roller kpuru ákwà kn...
Mee 30, 22
Ihe mkpuchi mkpuchi Roller nwere ọrụ ndị dị mkpa dị ka igbochi radieshon anwụ, igbochi okpomọkụ, ibelata okpomọkụ ime ụlọ, imezi ind ...
Otu esi ahọrọ akụkụ...
Otu esi ahọrọ ákwà mgbochi nke akụkụ ahụ? Mkpuchi akụkụ (nke a na-akpọkwa ákwà mgbochi mmanụ aṅụ), dị ka aha ahụ na-egosi, nwere nhazi dị ka accordion....
Otu esi ejikọta vetikal...
Ọmụma ihe mkpuchi kwụ ọtọ1.Mgbe ị na-ahọrọ ákwà mgbochi kwụ ọtọ, ị ga-amarịrị agba na agba nke agwa ọ bụla.Yellow nwere nwayọọ...
2022 Anyị na-aga n'ụzọ mgbe niile.
Adreesị: No.1098 Middle Section of Jiannan Avenue, High-Tech.Mpaghara, Chengdu, China.